Apple inoenderera nezviziviso zve32-bit kunyorera mu macOS 10.13.4 | Ndinobva mac
Yambiro nezve 32-bit application yakaiswa paMacs ine macOS High Sierra 10.13.4 inoenderera ichionekwa uye ndeyekuti parizvino ivo vese vanofanirwa kuvandudzwa makumi matanhatu neshanu. Kana iwe uri mumwe wevaya vanoshandisa 64-bit application paMac Izvo zvinokwanisika kuti iwe watoona kare yambiro iyo iyo system inotanga.
Vagadziri havachagone kuburitsa 32-bit kunyorera paMac App Store kubvira kutanga kwegore. Kune rimwe divi, yambiro dzinoramba dzichiuya uye zvinofungidzirwa kuti mushanduro nyowani ye macOS 10.15 iyo Apple ichatanga paWWDC munaJune, ichave shanduko uye izvi hazvichazotsigirwi.
1 Apple inokuyambira nekushanda uye kungoita
2 Zvekuita kana tikatambira chiziviso
Apple inokuyambira nekushanda uye kungoita
Aya mafomati asiri echimanjemanje anoratidza chiziviso uye izvi hazvidzokororwe nguva dzose, asi zvinoitika kana wadzima komputa. Apple pachayo yakazvitaura muchitaurwa muna Ndira:
Iyo yazvino vhezheni yemacOS yekutsigira makumi matatu nematatu mashandisirwo pasina kukanganiswa ndeye macOS High Sierra. Ita shuwa remangwana vhezheni yako yekushandisa ndeye 32-bit inoenderana nekushandisa matsva ekuongorora maturusi muXcode 64 beta uye kuyedza mu macOS 9.3 beta. Iyi vhezheni yeXcode zvakare inovaka makumi matanhatu nemasere maficha nekumisikidza - Manzana
Zvekuita kana tikatambira chiziviso
Pamwechete isu hatifanire kutya icho, nekuti iko kunyorera kucharamba kuchishanda zvakafanana kunyangwe yambiro, chakakosha ndechekuvandudza kusvika makumi matanhatu nematanhatu nekukurumidza sezvazvinogona. Kana iwe uri mumwe wevaya vanoda kuziva kuti ndeapi maapplication ari 64-bit uye akaiswa pane yako Mac, unogona kuzviita nenzira yakapusa nekutevera iyi diki dzidziso pane maitiro ekuwana ese 32-bit zvikumbiro zvakaiswa pane yedu Mac. Muchidimbu zviri nyore uye iyo inoshanda sisitimu pachayo ichatinyevera nezve izvi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac Os X » macOS High Sierra » Apple inoenderera nezviziviso zve32-bit kunyorera mu macOS 10.13.4
Pfungwa yePodPod uye mutengo unogona kunge wakamirira kuongororwa